तपाईंको मोबाइल भुक्तानी प्रक्रिया बढाउने शीर्ष5तरिकाहरू Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 26, 2017 Eran Feinstein
स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरू बढि लोकप्रिय उपकरणहरू छन् जुन व्यक्तिले हरेक दिन प्रयोग गर्दछन्। जब यो ई-कॉमर्सको कुरा आउँदछ, मोबाइल भुक्तानी एक लोकप्रिय विकल्प बनिरहेको छ, सजिलो र सुविधाको लागि धन्यवाद कहीँ पनि, कुनै पनी केही ट्यापहरूको साथ, कुनै पनि समयमा भुक्तानी गर्ने सुविधा। एक व्यापारीको रूपमा, तपाइँको मोबाइल भुक्तानी प्रक्रिया बृद्धि गर्नु एक सार्थक लगानी हो जसले ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउनेछ, र अन्तमा - अधिक बिक्री।
एक ईन्फेरियर भुक्तानी प्रक्रियाले तपाईंलाई तपाईंको उद्योगको लागि मोबाइल लेनदेन लक्ष्यहरू पुग्न रोक्नेछ र उच्च संख्यामा चार्जब्याक लिन सक्छ। यदि तपाईंले यी संकेतहरू याद गर्नुभयो भने, यो विशेष रूपमा तपाईंको लागि सुधारको लागि प्रासंगिक छ। त्यहाँ मोबाईल भुक्तान प्रक्रिया अनुकूलन गर्न थुप्रै चरणहरू छन्। यहाँ शीर्ष पाँच छन्:
१. एक मोबाइल मैत्री साइट बनाउनुहोस्
यो एक सहज मोबाइल भुक्तानी प्रक्रिया सिर्जना गर्न मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तपाईंको वेबसाइट उत्तरदायी हुनुपर्छ - मोबाइल प्रयोगको लागि आफै टेलरिंग गर्नुहोस् ताकि प्रयोगकर्ताहरूले जुम इन गर्न वा साना बटनहरूमा क्लिक गर्नुपर्दैन। वेबसाइटहरू जुन मोबाइल उपकरणहरूको लागि अप्टिमाइज गरिएको छैन निराश हो र ग्राहकहरूलाई भुक्तान प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दछ। यस अनुसार एडोब, १० मध्ये लगभग consumers उपभोक्ताहरू सामग्रीसँग संलग्न हुन रोक्दछ यदि त्यसले उनीहरूको उपकरणमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैन भने।
स्वच्छ, न्यूनतम डिजाइन, ठूला बटनहरू र पढ्न सजिलो पाठको साथ, ग्राहकले शपिंग र लेनदेन प्रक्रियामा छिटो अगाडि बढ्न सक्षम गर्दछ। केहि PSP हरूले होस्ट गरिएको भुक्तान पृष्ठहरू प्रदान गर्न सक्दछ जुन विशेष रूपमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो।
एक मोबाइल मैत्री वेबसाइट को अतिरिक्त, तपाई एक मोबाइल अनुप्रयोग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको मोबाइल उपकरणमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्दछन् र एकल ट्यापले खोल्न सक्छन्, तपाइँको ब्रान्ड औंलाको औंठीमा, २//24 राख्नुहोस्।
२. मोबाइल भुक्तानी विधि प्रस्ताव गर्नुहोस्
यो स्पष्ट बताउने जस्तो लाग्न सक्छ, तर प्रस्ताव मोबाइल भुक्तानी विधिहरू मोबाइल उपकरणको साथ ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी एक शानदार तरीका हो। तपाईले काम गर्नु भएको PSP ले मोबाइल भुक्तान विधिहरू एकीकृत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, जस्तै मोबाइल वालेटहरू र मोबाइल पैसा, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको फोनसँग भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। अन्य भुक्तानी विधिहरू, जस्तै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर, म्यानुअली जानकारी प्रविष्ट गर्ने समावेश छ, जुन सानो स्क्रिनमा गाह्रो हुन्छ र धेरै समय लिन्छ। यसको विपरित, मोबाइल भुक्तान मात्र केही स्वाइप र ट्यापहरूमार्फत गर्न सकिन्छ। द्रुत भुक्तान प्रक्रिया, ग्राहकले यसलाई पूरा गर्ने बढी नै सम्भावना हुन्छ, शपिंग कार्ट परित्यागलाई घटाउने उल्लेखनीयता कम गर्दछ।
Om. ओम्नी-च्यानल शपिंगको लागि अनुमति दिनुहोस्
टेक्नोलोजी जताततै छ - तपाईंसँग धेरै ग्राहकहरू हुन सक्छन् जसले घरमा तपाईंको वेबसाइट ब्राउज गर्न सुरू गर्दछन् र उनीहरूको मोबाइल उपकरणको साथ अन-द गो खरीदमा सम्पन्न गर्न चाहान्छन्। यदि तपाइँको भुक्तानी च्यानलहरु एक अर्को संग सुसंगत छ, यो गैर-मुद्दा हुन्छ। द्वारा अनुसन्धान Aberdeen समूह ओमनी-च्यानल ग्राहक स strate्लग्नता रणनीति भएका कम्पनीहरूले%%% कायम गर्ने दर पायो, तुलनामा 89 33% मात्र तुलनामा। तपाईंको मोबाइल साइट वा अनुप्रयोग देखा पर्दा तपाइँको डेस्कटप साइट को जैसा हुनु पर्छ। यो समान भुक्तानी विधिहरू पनि प्रस्ताव गर्नुपर्दछ - PSP सँग कुरा गर्नुहोस् यो सम्भावना सुनिश्चित गर्न।
S. यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले मोबाइल उपकरणहरुको लागी सुरक्षा समर्पित गर्नुभयो
ईकामर्सका सबै क्षेत्रहरूका लागि धोखाधडी सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर सुरक्षा खतराहरू सबै च्यानलहरू भन्दा फरक छन्। PSP छनौट गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले मोबाइल भुक्तानीको लागि समर्पित सुरक्षा प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, किनकि मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने काम अनलाइन प्रतिबद्ध ठगी भन्दा फरक हुन्छ। एक मोबाइल भुक्तानी प्रक्रिया को सरलता र प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट गरिएको न्यूनतम जानकारी सुरक्षा प्यारामाउन्ट बनाएर धोखाधडी जोखिम बढाउन सक्छ। मोबाइल सुरक्षा प्रविधीहरूले ट्र्याकि devices उपकरणहरू र बिलि and र शिपिंग ठेगानाहरूसँग तिनीहरूको स्थान मिल्दो, साथै कुनै शंकास्पद लेनदेन वा गतिविधि पत्ता लगाउन समयको साथ साथ यन्त्रहरूको विश्लेषण पनि समावेश गर्दछ।
A. PSP सँग काम गर्नुहोस् जुन एक एकीकृत समाधान प्रस्ताव गर्दछ
हामीले कसरी ग्राहकको अनुभव अझ राम्रो गर्ने भन्ने बारेमा बोलेका छौं, तर तपाईलाई के छ? एक व्यापारीको रूपमा तपाई मोबाइल भुक्तान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सजिलो भएको चाहानुहुन्छ। राम्रो भुक्तान सेवा प्रदायक (PSP) दुबै मोबाइल र डेस्कटपको लागि एकीकृत समाधान प्रस्ताव गर्दछ, भुक्तान विधिहरूको विस्तृत श्रृंखलाको साथ। तिनीहरूले उपकरणहरू प्रदान गर्नुपर्दछ जुन तपाईंलाई मोबाइल भुक्तान विधिहरू एकीकृत गर्न सजिलो बनाउँदछ। यी उपकरणहरूले सफ्टवेयर विकास किटहरू र मोबाइल भुक्तान एपीआईहरू समावेश गर्न सक्दछ।
एक इष्टतम मोबाइल भुक्तानी प्रक्रिया भनेको मोबाइल प्रयोगकर्ताको आवश्यकताहरू अनुरूप मोबाइल अनुभव डिजाइन गर्नु हो। एक समर्पित मोबाइल साइट सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको डेस्कटप साइट प्रतिबिम्बित गर्दछ, र उपयुक्त सुरक्षा र भुक्तान विधिहरूसहित यसलाई सुखी बनाउनुहोस्, खुशीका मोबाइल ग्राहकहरूका लागि, र वृद्धि रूपान्तरण।
टैग: मोबाइल वाणिज्यमोबाइल अनुकूलमोबाइल भुक्तानीमोबाइल सुरक्षाओम्नी-च्यानल शपिंगpsp
के अनलाइन सफ्टवेयर निर्देशिका प्लेटफर्मको साथी वा प्रतिस्पर्धी हो?